Nhau - Takasangana neazvino mamiriro emabhizinesi, isu tinofanirwa kuzviita nhanho nhanho uye tichishingairira
Yakasanganiswa nemamiriro azvino emabhizinesi, isu tinofanirwa kuzviita nhanho nhanho uye tichishingairira
Musi waApril 16, mbatya dzePinyang dzakagamuchira odha yezvidimbu zviuru zvitatu, zvakaburitswa zvinobudirira musi wa29. "Huwandu hweiyi batch yemadhora idiki kwazvo, uye inoda mavara manomwe. Zvinotora maawa gumi nemaviri kuti rimwe ruvara ruve dhayi uye mazuva matatu kwemavara manomwe. Izvo zvinodawo kupedzisa maitiro akasiyana siyana sekuruka nekudhinda. Chekupedzisira, inogona kununurwa mumazuva gumi nematatu, izvo zvinoratidza kuchinjika uye nekukurumidza kwekugadzirwa kwebhizinesi.
“Pasina shanduko yebhizinesi nekufunga paInternet, zvinhu izvi hazvigone kuitwa. Kufunga nezveInternet kunoda kubatana kuti ishandise pfungwa yekuendesa kwemazuva manomwe kune yega maitiro. Diki rakavharwa-chiuno rinoita rakakura rakavharika-chiuno, icho chakabatanidzwa mukusanduka kugadzira. Flexible kugadzira, sechidimbu cheupfu, inogona kukanywa zvisinei hazvo kukura kwacho kuri.
Kuchinja-chinja hakuratidzwe chete muchirevo chekugadzira shanduko, asi zvakare mune rezvebhizinesi manejimendi pfungwa. 70% yebasa muzvipfeko zvembatya zvinofanirwa kunge zviri zvidimbu, uye vashandi vanofanirwa kunge vachida kuita mirairo mikuru. Naizvozvo, inochinja-chinja kugadzira ine yakanyanya kudikanwa pane manejimendi uye inofanirwa kuve yakagadzirira nhanho nhanho munguva pfupi yenguva. Kugadzira zvipfeko ichiri indasitiri inoda basa. Semuenzaniso, iyo otomatiki yekudyisa michina muye yekudyara musangano inovandudza maitiro kunyatsoita uye chigadzirwa mhando. Nekudaro, mune mamwe maratidziro ekugadzira, hazvigone kubvisa zvachose basa. Izvo hazvidzivirirwe uye zvinodikanwa kuti indasitiri Internet ikure kusvika parizvino. Nekudaro, nekuda kwemaindasitiri akasiyana uye nhanho dzakasiyana dzekupinda, zvinodikanwa kuti ubatanidze mamiriro azvino emabhizinesi kuti zviite nhanho nhanho uye nekushingairira.